Ukuphupha ngeLava Discover ➡ Discover kwi-Intanethi ▷ ➡️
ILava ligama elinikwe amatye anyibilikileyo angena ukusuka kumbindi womhlaba ukuya kumphezulu. Phambi kokuba obu bumanzi bufike kumphezulu womhlaba, bubizwa ngokuba yimagma. Nabani na okhe wabona imifanekiso yokuqhushumba kwentaba-mlilo uyayazi indlela enamandla ngayo la mlambo. Kuxhomekeka ekwakhiweni kwelitye, amalahle angakwazi ukufikelela kubushushu obufikelela kwi-1300 degrees celcius. Ukuqhuma kweentaba-mlilo, apho kwenzeka la maqondo obushushu agqithisileyo, unokufumana, umzekelo, kwiintaba-mlilo zaseHawaii.
Akukho nto inokumisa ukuhamba kwodaka, nkqu namanzi anokupholisa ingozi yokuhamba. Oku kuphawuleka ngakumbi kwimeko yokugqabhuka kwentaba-mlilo esiya elwandle. Oku kupholisa kuphela umphezulu wentaba-mlilo kwaye ingaphakathi lihlala livutha ixesha elide. Iigesi ezibanjiswe kudaka lwentaba-mlilo zinokwenza iagate quartz, eyenziwe kakuhle kwaye ihlala isetyenziselwa ukwenza ubucwebe.
Isimboli yamaphupha "iLava" ivele njani emaphupheni akho? Phinda ucinge ngephupha lakho ngononophelo kwaye uzame ukukhumbula iinkcukacha ezininzi kangangoko kunokwenzeka.
1 Uphawu lwephupha «iLava» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «iLava» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «iLava» -ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «iLava» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuba umfanekiso wephupha "uLava" ubonakala kumava akho ephupha, oku kubonisa, ngokokuchazwa ngokubanzi kwephupha, ukuba uyinyani. peligro Sele ndiqaphele. Uyazi ukuba iimeko ezithile zifuna ukhathalelo kunye nengqwalaselo eyodwa. Igama "ingozi" linokuthetha iingxaki ezikucaphukisayo kubomi bakho bemihla ngemihla okanye isoyikiso ngendlela yobuxoki nenkohliso. Apha, imeko yobomi bomntu ngamnye wephupha kufuneka ibandakanywe kutoliko lwephupha.
Ukubona intaba-mlilo ebilayo ngodaka olushushu phambi kwakho imele ibe nkulu kwaye yomelele Ukuthanda y Iidayes. Ukulala kuthanda ukukucinezela oku, kodwa ezi mvakalelo zisebenza ngamandla amakhulu ngaphantsi komphezulu kwaye zibize umntu ekuthethwa ngaye ukuba enze okuthile. Ukuhlala ucinezela iminqweno kunye neemfuno kungekudala ziya kufumana indlela yazo el mundo Ngaphandle kwaye, ukuba bacinezelwe ixesha elide, oku kunokuba kunxulumene nokuqhushumba okunamandla nobundlobongela.
Uphawu lwephupha «iLava» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba lengqondo, i-lava imele iimvakalelo ezinamandla. Oku kunokuba ngumsindo okanye ukuthanda. umnqweno wesondo ukuba. Ngaphezulu kwako konke, ukubona udaka lwe-incandescent ephupheni kubonakalisa ngokucacileyo ubukhulu bezi mvakalelo. Ukuba uyibamba ixesha elide, ngenxa yeentloni okanye ukungazithembi, inokuzibonakalisa kwizikhalazo zomzimba okanye ukukhawuleza kweemvakalelo.
Ukuba lava flow ukuba amava omnye ephupheni sele kupholile kwaye yomelele, oku kwakhona kuba lupholiso yokwenene iimvakalelo Umzimba womntu. Mhlawumbi ubudlelwane kudala buphelile ngenxa yokuba uthando kunye nomnqweno ulahlekile. Olu tshintsho kwiimvakalelo lunokuzibonakalisa kumfanekiso wephupha "iLava" kwaye ichaphazele kokubini ukuphupha kunye neqabane okanye umntu omthandayo.
Umona kunye nokuvuleleka kunokufihla ngasemva kwenginginya yenyambalala eyonakalisayo. Umntu ophuphayo usenokutyekela kwizenzo eziqwalaselwe gwenxa kwaye angazilawuli yena okanye iimvakalelo zakhe. Ke ngoko, lava angathanda amaphupha Atención ukululeka, kuba umntu ochaphazelekayo unokonakalisa njengaye kwaye kunokubangela umonakalo omkhulu ngenxa yendlela yabo engenakuchukumiseka kunye neemvakalelo.
Uphawu lwephupha «iLava» -ukutolika kokomoya
Umfanekiso wephupha «Lava» umi kwinqanaba lokomoya lomelele, iimvakalelo ezingenakoyiswa. Ukuba ezi zicinezelwe kwakhona kwaye kwakhona, umphefumlo nawo wonakele, kuba ngengqondo elungeleleneyo onke amandla kufuneka alungelelane.